नेपालमा एचआईभी सङ्क्रमण घट्दो
काठमाडौँ, मङ्सिर १६ गते । पछिल्लो समय नेपालमा एचआईभी/एड्सको सङ्क्रमण घट्दै गएको छ । एचआईभीको नयाँ सङ्क्रमण ८० प्रतिशतले र एड्सबाट हुने मृत्यु २२ प्रतिशतले घटेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी छ ।
एचआईभी/एड्ससम्बन्धमा बढ्दो जनचेतनाले गर्दा एड्सप्रति मानिसको धारणा बदलिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा. तरुण पौडेलले नेपालमा सन् २०१० को तुलनामा १४६ प्रतिशतले एन्टिरेट्रोभाइरल (एआरभी) औषधिमा पहुँच बढेको जानकारी दिँदै हाल नेपालमा करिब ३९ हजार ३९७ जनामा एचआईभी सङ्क्रमण रहेको अनुमान गरिएको बताउनुभयो । तीमध्ये पुरुष २४ हजार ४४९ र महिला १४ हजार ९४८ छन् । नेपालमा १५ देखि ४९ वर्ष उमेर वर्गमा ०.२ प्रतिशत एचआईभी दर रहेको जानकारी पनि डा. पौडेलले दिनुभयो ।
विश्वमा सन् २००० को तुलनामा ३५ प्रतिशतले एड्सको सङ्क्रमण दर घटेको जानकारी दिँदै डा. पौडेलले बच्चामा हुने सङ्क्रमण दर पनि ५८ प्रतिशतले कम भएको बताउनुभयो ।
डा. पौडेलका अनुसार वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा नेपालबाट कामदारका रूपमा जाने पुरुषहरूमा एचआईभी सङ्क्रमण बढी भएको पाइन्छ । मुख्यतया सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका जिल्लाबाट छिमेकी मुलुक भारतमा काम गर्न जानेमध्ये अधिकांशले एचआईभी लिएर फर्किएका हुन्छन् । अशिक्षा र अज्ञानता नै एचआईभीको मुख्य कारण रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “गाउँभन्दा सहरी क्षेत्रमा एचआईभीको सङ्क्रमण बढ्दो छ । ”
हाल विश्वमा तीन करोड ३३ लाख मानिस एचआईभी सङ्क्रमित छन् । नेपालमा सन् १९८८ मा पहिलोपटक एचआईभी भित्रिएको हो । एचआईभी÷एड्सबारे जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले हरेक वर्ष डिसेम्बर १ मा अन्तर्राष्ट्रिय एड्स दिवस मनाउने गरिन्छ । बिहीबार ‘हामी सबैको काम, एचआईभीको रोकथाम’ भन्ने नाराका विश्व एड्स दिवस मनाउन लागिएको छ ।